Xildhibaan Saabir oo ka hadlay sababta ay ugu xuub-siibteen Galmudug - Jowhar Somali Leader
Home Somali Xildhibaan Saabir oo ka hadlay sababta ay ugu xuub-siibteen Galmudug
Xildhibaan Saabir oo ka hadlay sababta ay ugu xuub-siibteen Galmudug
Cabdi Saabir Nuur Shuuriye oo ka mid ahaa Xildhibaannada dowladda Federaalka ee mucaaradka oo xalay Madaxweynaha Galmudug u magacaabay xilka Wasiirka Dekadaha Galmudug ayaa ka hadlay go’aankiisa la xiriira xilkaas.
Xildhibaan Saabir ayaa qoraal uu bartiisa Facebook kaga hadlay sababta ay Federaalka uga soo xuubsiibteen dowlad goboleedka Galmudug, isagoo tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu qeyb ka noqdo dadaalka laba kacleynta Galmudug iyo sidii horumarka deegaanka qeyb weyn uga qaadan lahaayeen.
Halkan hoose ka akhriso fariinta Xildhibaanka
FARRIIN IYO GO’AAN XUUBSIIBASHO.
Tan iyo markii la aasaasay Galmudug sannadkii 2015 markaas oo aan ahaa korjooge arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo kadib markii aan noqday Xildhibaan qaran oo dowlad goboleedka Galmudug ku matala Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Dhowr jeer oo aan u soo noqnoqday degaanada Galmudug aniga oo ka shaqeynayay ujeedooyin dan guud iyo arrimo bani’aadannimo, mar kasta oo aan tago meel ka mid ah deegaanada Galmudug waxaan la soo laabanayay dhakafaar iyo amakaag aniga oo rumaysan la’aa nolosha adag ee ka jirta deegaanada Galmudug. Waxaanan mar walba isweydiinayay: Yaa u maqan dadkaan iyo deegaanadaan ay labeentiisii isku herdinayaan siyaasada heer Federaal ee Soomaaliya.
Jawaabta ii soo baxaysay waxa ay ahayd in ay lagama maarmaan tahay in Galmudug ay baahi weyn u qabto labeenteeda rag iyo dumarba in ay dib ugu soo laabtaan si loo samata bixiyo dadka reer Galmudug. Ileen talo rag kama dhammaatee waxa ay talo ka maarmi weyday in madaxweyne Axmad Cabdi Kaariye “Qoorqoor” uu inoo soo bandhigo hindise aniga iyo saaxiibkey Axmad Macalin Fiqi iyo intii kale ee dib nooga soo biiri kartaba in aan ka qayb noqono dadaalka laba-kacleynta Galmudug taas oo ah in aan Federaalka uga soo xuubsiibano dowlad goboleedka Galmudug.
Kaddib markii aan dib u fekernay oo aan la tashiyo baaxad weyn la sameynay dadkii reer Galmudug qaybahooda kala duwan, waxaa innaga iyo iyaguba wada guddoonsanay in aan u soo gacan bannaano arimaha Galmudug isla markaasna aan lixaadkeena isugu geyno horumarka dadka iyo deegaanka Galmudug oo aan aaminsanahay inaan ka miro dhalin karno hamiga dadka reer Galmudug inshaa’allah.
Ugu dambeyn, waxaan Alle ka baryayaa in uu nagu guuleeyo hawsha cusub hadana culus ee dadka iyo deegaanada Galmudug aan u qaadnay. Waxaan sidoo kale u baahanahay ducadiina, taageeradiina iyo in aad nagala qaybqaadataan hawsha culus ee na loo dhiibay.
Wadajir iyo Iskaashi ayaan ku wada guuleysan karnaa inshaa’allah.